Ffmpeg: beddelaad qaabab qoraallo fara badan | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | La cusboonaysiiyay 17/12/2014 11:25 | Isticmaal FileLet
Halkan waxaa ku yaal tilmaame kooban oo loogu beddelayo feylasha codka adigoo adeegsanaya ffmpeg.
1 Qaabab maqal ah
2 Qaabab Video ah
3 Ku dar subtitles fiidiyow
4 U beddel fiidiyow qaabka OGV Theora
4.1 qaab video kasta -> Ogg Theora
4.2 Hubi natiijada
4.3 Beddelayaasha kale
Qaabab maqal ah
Tani waa in hoos loo dhigo tayada MP3:
$ curyaan -b 64 source_file.mp3 manufa_file.mp3
64 wuxuu noqon doonaa bitrate-ka cusub ee faylka. Mid kasta oo ka mid ah qiimayaasha soo socda ayaa loo isticmaali karaa: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320. Sida ugu sarreysa ee bitrate-ka, waxaa sare u kacaya tayada codka ( iyo ka sarreeya cabirka faylka).
Barnaamijka Mp32ogg ayaa loo baahan yahay
$ sudo karti u rakib mp32ogg
$ mp32ogg muusig.mp3 music.ogg
Si loogu beddelo galka oo dhan
Waa kuwan qaar ka mid ah beddelaadyada caadiga ah ee faylasha codka isticmaalaya Ffmpeg.
Halbeegga ka dib ab waxaan cayiman doonaa qaniinyada MP3 (192 tusaale ahaan).
$ ffmpeg -i muusig.mp3 -acodec amr_nb -ar 8000 -ac 1 -ab 32 music.amr
Ka dhegeyso codka faylka 'MPEG' una beddel MP3
$ xishood -Ow -s 44100 -o output.wav input.mid
$ xishood -Og -s 44100 -o soo saar.ogg input.mid
Qaabab Video ah
Qaar ka mid ah beddelaadyada caadiga ah ee faylasha fiidiyowga ayaa hoos ku taxan iyagoo isticmaalaya Ffmpeg.
$ ffmpeg -i filim.avi -acodec mp3 -ar 11025 movie.flv
Laga soo bilaabo nooca 9.04 waa inaad ku rakibtaa xirmada libavcodec-unstripped-52 oo ku beddel '-acodec mp3' '' -acodec libmp3lame 'xulashada taliska.
Ku darista ikhtiyaarka -hq isticmaal tayo sare leh.
$ ffmpeg -i myfile.avi -martget pal-vcd myfile_vcd.mpg
Kani waa qaab Dijital Video ah, qaab isku mid ah oo kamarad fiidiyoow dijitaal ahi soo saaro waana midka loo isticmaali karo sixitaanka Kino.
$ ffmpeg -i movie.avi -martget pal-dv movie.dv
Tani waxay i siisaa xoogaa khaladaad waqtiyada maqalka ah oo aanan u arkin in la dareemo. Haddii aad rabto inaad ka fogaato, waa inaad sidan ku sameysaa:
Hab kale oo loo sameeyo:
Kino wuxuu kaloo aqriyaa qaabka AVI ee qaabkan loo sameeyay (tusaale ahaan FLV):
$ffmpeg -i swing.avi -vcodec png -vframes 1 -an -f rawvideo -s 320x240 swing1.png
$ ffmpeg -i filim.3gp -vcodec mpeg4 -acodec mp3 movie.avi
$ ffmpeg -i file.mpeg -s qcif -r 12 -ac 1 -ar 8000 -b 30 -ab soosaar 12gp
Ama sidoo kale leh tayo badan:
$ ffmpeg -i file.mpeg -s qcif -r 15 -ac 1 -ar 8000 -b 256000 -ab soosaar 15gp
$ ffmpeg -i filim.mpg -vcodec flv -y movie.flv
Faylka la soo saaray kuma jiraan macluumaadka metadata si sax ah. Tani waxay tusinaysaa in markii aad u isticmaasho faylka Flash video daawadayaasha sida Fiidiyowga Flash feylku wuu fiicnaan doonaa laakiin barta horumarka ma cusbooneysiin doonto. Si aad u hagaajiso adeegsiga korontada jaceyl 2 inaad ka heli doontid http://inlet-media.de/flvtool2. Waxaa lagu sameeyay Ruby sidaa darteed waa inaad rakibataa xirmada u dhiganta. Waxaa loo isticmaalaa sidan:
$ flvtool2 -U filimka.flv
Waxaan sidoo kale leenahay koronto kale oo la yiraahdo Cirbadeeyaha MetaData ee FLV in xitaa haddii ay tahay Windows, ay si buuxda ula shaqeyso Khamrigu (ugu yaraan nooca xariiqda taliska). Waxaa loo isticmaalaa sidan:
$ khamri flvmdi.exe movie.flv
Hab kale oo loogu beddelo qaabka FLV ayaa isticmaalaya codeer xusuusta:
$ mencoder -mf on: w = 800: h = 600: fps = 0.5 -ovc divx4 -o wax soo saar.avi * .jpg
Markaa wuxuu ku tusayaa sawir labadii ilbiriqsiba mar, haddii aad rabto afartii ilbiriqsiba waa inaad gelisaa 0.25 fps.
Haddii amarkan aanu adiga kuu shaqeynayn, isku day
$ mencoder "mf: //*.jpg" -mf fps = 0.25 -vf scale = 480: 360 -o saarka.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec = mpeg4
Taas oo aad ka heli doontid fiidiyow dhammaan faylasha jpg ee ku yaal waddada aad ka bilowdo amarka taasna waxay ku tusaysaa 1 sawir 4-tii ilbiriqsiba.
Ku dar subtitles fiidiyow
U beddel fiidiyow qaabka OGV Theora
Ogg Theora waa koodhka fiidiyowga ee horay loogu sii rakibay Ubuntu, markaa uma baahnid inaad rakibtid wax koodh ah oo lagu ciyaaro Ubuntu (taasi waa faa'iidada theora). Hoos waxaa ku qoran tusaalooyin ka mid ah beddelaadda fiidiyowga adoo adeegsanaya ffmpeg2theoraSi loo rakibo, waxaan fureynaa terminal (codsiyo> aalado> terminal) oo qor:
$ sudo karti u rakib ffmpeg2theora
Ffmpeg2theora waa barnaamij amar ah (maahan mid garaaf ah), sidaa darteed wax walba waxaa laga isticmaalaa boosteejada, fiidiyowga aad rabto inaad beddesho waa inuu ku jiraa galka guriga isticmaalaha.
qaab video kasta -> Ogg Theora
tani waxay abuureysaa faylka Ogv Theora ee la yiraahdo video clip.ogv. Si aan ugu qorno tayo kale, aan dhahno tayada fiidiyowga: 7 iyo tayada maqalka: 3:
$ ffmpeg2theora -v 7 -a 3 video clip.extension
waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Presets v2v si aad uqorto fiidiyowgaaga
$ ffmpeg2theora -p fiirinta fiidiyowga clip.dv
in koodh-garaynta fiidiyowgu ka bilaabmayo 10-ka labaad oo dhammaanaya daqiiqadda labaad ee fiidiyaha
$ ffmpeg2theora -s 10 -e 120 video clip. kordhin
in muuqaalka fiidiyowgu yahay 512 iyo codka 96
$ ffmpeg2theora -V 512 -A 96 video clip.extension
fiidiyowga waxaa loo qaabeeyey 640 × 480
tayadoow cabirka fiidiyowga
$ ffmpeg2theora --kafiiri fiidiyowga. kordhinta
cadee magaca wax soo saarka (fiidiyowga horey uqeexan)
$ ffmpeg2theora -o magacyo magacyo kale oo magacyo ah clip clip. Extension
sida muuqata waa adeegsan kartaa amarradii hore hal xariiq
$ ffmpeg2theora -s 10 -e 120 -V 512 -A 96 x 640 -y 480 --kamiddeeyso -o magacyo fiidiyow magac-beddel ah. kordhin
Haddii qaabka bartilmaameedka uusan taageerin ciyaaryahanka warbaahinta Totem waad adeegsan kartaa arjiga ffplay maxaa ku jira xirmada ffmpeg, wuxuu ciyaari doonaa qaab kasta oo ay taageerayaan ffmpeg. Tani waxay faa'iido u tahay, tusaale ahaan, qaabka codka maqalka ee AMR.
U beddel faylasha fiidiyowga bilaashka ah ee tooska ah taleefankaaga gacanta, iPod, PSP, PC Waa adeeg beddelaad internet ah, markaa uma baahnid inaad wax ku rakibto kombuyuutarkaaga.
Zamzar Beddel qaab kale oo bilaash ah oo khadka tooska ah ah. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad bedesho dukumiintiyo iyo maqal iyo muuqaalba.
Kalluun Iyo beddelaad qaab kale oo khadka tooska ah ah!
Wareegtarka Warbaahinta Waa beddele qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab fudud oo muuqaal ah. Ku shaqeeyaa hal nooc Ffmpeg la soo ururiyey si loo taageero qaabab dheeri ah.
Cidhifka Transcoder Waa mashruuc cusub oo si weyn u fududeynaya beddelidda qaababka fiidiyowga, gaar ahaan. Jaantus ahaan waa wax aad u fiican, in kasta oo aan weli loo xirxirin Ubuntu oo haddii aad rabto inaad tijaabiso waa inaad ku sameysaa qaabkii hore.
Beddel faylasha Beddelaan Faylalku waa adeeg beddelaad fayl toos ah oo toos ah. Waa hal ikhtiyaar oo dheeri ah oo isticmaalayaashu leeyihiin markay dooranayaan adeeg noo ogolaanaya inaan galno feyl qaab qaas ah sidaa darteed loogu rogi karo fayl kale oo isku mid ah ama qaab kale oo isla qaybtaas ah.
cometdocs Waa beddele awood badan oo khadka tooska ah ku shaqeeya oo ka shaqeeya in ka badan 50 qaabab oo kala duwan, oo kuu oggolaanaya inaad si toos ah uga fuliso dhammaan noocyada is-beddelashada biraawsarka, adiga oo aan u baahnayn inaad gabi ahaanba wax rakibto, oo gebi ahaanba bilaash ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Ffmpeg: badalida qaababyo farabadan
Mahadsanid ... Ma aanan ogeyn wax walba oo barnaamij aad u fudud laakiin aad u awood badan uu qaban karo, maalin kasta waxaan aad ugu qanacsanahay go'aankeyga inaan u wareego Linux (Waxaan haystaa OpenSuse 12.2)
Juan Escobar Arias sawir qaade dijo
Muxuu yahay tifaftiraha fiidiyow ee midka lagu arko sawirka?
Jawaab Juan Escobar Arias
Waxaa loo yaqaan «Cinelerra»
eM dheh eM dijo
Koofiyadayda ayaan uqaadayaa mowduuc sidan u qurux badan iyo macluumaad qiimo leh, waa inaan ka faaloodaa shalay 12-12-2011 waxaan raadinayay inaan badalo qaababka muuqaalka waxaanan kala kulmay macluumaad Ffmpeg ah, markaan aqriyay kadib waxaan arkaa awoodiisa dhabta ah maantana waxaan ka hel mawduucan macluumaad faahfaahsan.
Mawduuc aad u fiican
Jawaab eM Di eM
Madax xanuun kale ayaa bogsaday boggan. Waxa ugu fiican internetka, shaki la'aan.
Bilaabida xawaaraha sare ee Ubuntu cusub
Waa maxay Mono maxayse khatar u noqon kartaa?